क्यान्सरबाट ग्रसित सेनाली बेन्द्रे किन रोइन ? – Medianp
क्यान्सरबाट ग्रसित सेनाली बेन्द्रे किन रोइन ?
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, असार २५, २०७५१०:१४0
एजेन्सी,२५ असार । हाइग्रेड क्यान्सरबाट ग्रसित भएकी अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रे उनको साथी दिव्यको ट्वीट हेरेर रोएकी छन् ।
सोनालीलाई क्यान्सर भएको खबर सुनेपछि अभिनेत्री दिव्या दत्ताले उनकालागि एक भावुक पत्र लेखिन्। ट्विटमा दिव्याले बलिउड फिल्म उद्योगमा आएपछि सोनाली आफ्नी सबैभन्दा पहिली साथी भएको बताइकी छन्। दिव्याको यो पत्र पढेर सोनाली निकै भावुक भइन्। अनि सोनलीले दिव्याको ट्विट शेयर गर्दै लेखिन्, ‘तिमीले मलाइ रुवायौ दिव्या लभ यू थ्यांक यू ।
न्यूयोर्कमा क्यान्सरको उपचार गराइरहेकी अभिनेत्री सोनालीले केही दिन अगाडी ट्वीटरमार्फत जानकारी दिएकी थिइन् । उनले ट्विट गर्दै भनिकी थिइन्, ‘कहिले काही तपाइँलाई कुनै कुराको आशै हुँदैन भनेपनि जीवनले तपाइँलाई त्यस्तो गरिदिन्छ। हालैमा एक रिपोर्टमा मलाइ हाई ग्रेड क्यान्सर भएको थाहा भयो। मलाइ यो विषयमा अहिलेसम्म केही थाहा थिएन।
मेरो परिवार र मेरा साथी मेरो नजिक छन्। सबैले मलाइ समर्थन गरेका छन् र मेरो हेरचाह पनि गरेका छन्। म भाग्यशाली छु र सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो रोगसँग लड्ने यो भन्दा दोस्रो तरिका अरु केही हुन सक्दैन। अहिले म न्युयोर्कमा उपचार गराइरहेकी छु। म आशावादी छु र मेरो बाटोमा आउने सबै समस्याको डटेर सामना गर्नेछु। अहिलेसम्मको यात्रामा तपाइँको माया र सहयोगले मलाइ सजिलो भयो। त्यसकालागि म आभारी छु।’
सेनालीलाई क्यान्सर भएको खबर सुन्ने वित्तिकै उनलाई भेट्न अक्षय कुमार न्युयोर्क पुगेका थिए। आफूले सोनालीलाई भेटेको कुरा स्वयं अक्षय कुमारले अंग्रेजी पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्ससँगको कुराकानीमा स्वीकार गरेका छन्। ‘मलाइ थाहा छ सोनाली फाइटर हुन्। भगवानले उनलाई विरामीसँग लड्ने शक्ति प्रदान गरुन् र उनी फेरि स्वस्थ हुन्,’ अक्षयले भनेका छन्।
संसदीय समितिमा महिलाले सभापति पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
अमेरिकी बुहारीबाट जन्मेका नाति निकोसँग कलाकार हरिवंश आचार्य
कट्टु लाएर वरुण धवनले मनाए गर्लफ्रेन्ड नताशासंग होली, फोटो बन्यो भाइरल
बलिउडका यी ५ कलाकार दम्पतीहरु , जसको गर्भपातले लुटेको थियो सबै खुसी ! (तस्विर)
बिपना थापा देखि रेखा थापासम्म, यी कलाकारले दिए करिश्मालाई एसइइ परिक्षाको शुभकामना